ANTSO AVO MIANTEFA AMINAREO MPANAPAKA : MBA HO VEHIVAVY NY ATSASAKY NY GOVERNEMANTA | Conseil National des Femmes de Madagascar
← Nous Pouvons Toutes Être Défenseuses Des Droits Humains
APPEL AU(X) DECIDEUR(S) : POUR UN GOUVERNEMENT A MOITIE FEMININ →
ANTSO AVO MIANTEFA AMINAREO MPANAPAKA : MBA HO VEHIVAVY NY ATSASAKY NY GOVERNEMANTA
« Ny fandriam-pahalemana tsy mateza raha tsy mandray anjara sy voasolo tena amin’ny sehatra fanapahan-kevitra ny vehivavy », hoy Atoa Kofi Annan, foiny izy Sekretera Jeneralin’ny Firenena Mikambana.
Vorian’ny FFKM ireo Filoham-pirenena efatra mirahalahy ankehitriny sy teo aloha, miampy ny Filohan’ny Tetezamita teo aloha, miezaka mikaroka ny fomba rehetra hahatongavana amin’izay hampiravina indray ny fihavanana eto amin’ny Firenena. Koa mahatsiaro izay teny mafonja nataon’Atoa Kofi Annan izay isika ankehitriny.
Mahavelombolo ny fikambanana manao sonia etsy ambany ny mahita fa misy vehivavy an’isan’ny mpanolo-tsaina manodidina ny telo amin’izy dimy miarahalahy mianaka. Midika izany fa misy dia misy tokoa ny vehivavy manam-pahaizana, sady manana traikefa eo amin’ny fiainana politika. Mampirisika ny Filoha Rajaonarimampianina sy Zafy ireo fikambanana ireo mba hijery izay vehivavy azony itokiana mba hanolo-tsaina azy, hahalavorary ny dinika hifampihavanana indray.
Izy dimy mirahalahy mianaka nitondra ny Firenena tato anatin’ny roapolo taona no miara-midinika. Kanefa ny fandriampahalemana mateza dia eny anivon’ny andrim-panjakana isan-ambaratongany ihany koa no ananganana azy. Voatendry izao ny Jeneraly Jean Ravelonarivo ho Praiministra. Ny ministra handrafitra ny Governemanta indray izao no ho tendren’ny Filoham-Pirenena.
Mikofokofoka ny mpanao politika isan-karazany, fa hanendry ny ministra ao amin’ny Governemanta ny Filohan’ny Repoblika ato ho ato. Ny fikambanana manao sonia etsy ambany dia mampirisika ireo vondrona politika mpanolotra lisitra olona ho tendren’ny Filohan’ny Repoblika ho ministra, mba hanolotra lisitra ahitana vehivavy maro, mifandanja amin’ny isan’ny lehilahy.
Mampirisika ny FIloha Rajaonarimampianina ihany koa izahay hanendry Governemanta izay hahitana vehivavy mitovy isa amin’ny lehilahy. Ananan’ny Firenena tsara ny vehivavy mendrika ny andraikitra ministra. Izany dia antoky ny fanorenana fandriam-pahalemana mateza, fampandrosoana mateza, demokrasia mateza.
Antananarivo, faha 15 Janoary 2015
Entreprendre au Féminin de l’Océan Indien (EFOI-Madagascar)
Focus Development Association (FDA)